Ukuphupha malunga ne-mousetrap ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iimpuku zinokuvelisa iimvakalelo ezahlukileyo ebantwini. Abanye bazifumana zimnandi kwaye zintle, abanye bazifumanisa zintuku zincinci. Ukanti ngaphakathi kweendonga zazo ezine, bambalwa kakhulu abanokufuna imouse. Ngesi sizathu, sifaka imigibe yeempuku xa sikrokrela ukuba kukho ezinye ezikufutshane, egadini, kwigaraji okanye nasendlwini yethu. Kwiimeko ezininzi, umgibe wempuku uya kubulala iimpuku. Nangona kunjalo, imigibe enjalo ikhona ukuba iimpuku ziyabamba ziphila.
Imigibe yeetrust ayisoloko isetiwe okanye ibonwa ngokwenyani, kodwa ngamanye amaxesha nakumaphupha ngokwawo. Kodwa lunokuthetha ntoni olu phawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «i-mousetrap» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-mousetrap» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-mousetrap» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-mousetrap» - ukutolikwa ngokubanzi
Impuku ngokusisiseko ifumaneka kutoliko jikelele lwamaphupha kwiingxaki ezincinci kunye nobunzima oboyikisa umntu ekubhekiswa kuye kubomi bemihla ngemihla. Kodwa nabani na okwaziyo ukurhwebesha impuku okanye ukuntywila emgibeni kwaye ayibambe iba yinto ebomini bokwenyani. ngempumelelo ungagqiba. Ukulindela kunye nethemba linokudlula, kokubini nangokwezemali.
Ukuba i-mousetrap okanye i-rattrap ifakiwe ephupheni, oku kunokuhlala kubhekisa kwi isicwangciso sobuchule lomntu ochaphazelekayo. Uyakwazi ukuphelisa kwaye ukoyike abachasi bakho ngokusebenzisa iindlela ezizodwa kunye nokusebenza.
Uphawu "lwempuku" lukhumbuza nje ukuba ulwenze lukhulu UbulumkoUkuba umntu ophuphayo ubona i-mousetrap, angazifakanga yona, kodwa egrogrisa ngokuvala nangaliphi na ixesha. Mhlawumbi ephupheni uzibona eyimpuku kwaye abaleke umngcipheko wokuwela emgibeni. Kule meko, abanye baya kubona kwizicwangciso zomntu ezingalunganga. Akufanele ucinge ngokuzithemba okukhulu ukuba umntu ngamnye osebenza naye wenza kuphela ngokuhambelana nemibono kunye neminqweno yakho.
Uphawu lwephupha «i-mousetrap» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, uphawu lwe "mousetrap" luvumela iingxelo ezahlukeneyo malunga Ubudlelwane ukusuka kumntu ochaphazelekayo ukuya koontanga bakhe. Okokuqala, iphupha malunga ne-mousetrap limele isilumkiso:
I-subconscious ngokwayo iye yaqonda ukuba ukuphupha akuphathwa ngokunyanisekileyo nangokwamkelekileyo ngumhlobo, umntu osebenza naye okanye umntu omaziyo. Enye into ifihla into, izama ukubonakalisa iimfuno zabo ngokuziphatha nangaphandle kokuqwalaselwa. Umntu ekuthethwa ngaye usenokuba akakhange akubone oku kwinqanaba lokuqonda, kodwa kuya kufuneka uqonde iphupha lomgibe wesithuthi njengesicelo esingxamisekileyo sokuzibamba ebantwini abathile, ukuze ungazivezi kakhulu ngawe.
Ukongeza, kunokwenzeka ukuba wena ngokwakho ukwindlela yokuhambisa iimpuku ephupheni. Iingcali zengqondo zithatha ukuba oku kubonisa ubudlelwane obungalunganga kumntu ochaphazelekayo. Ufuna ukukhululeka, kodwa awukwazi. Ubophelelo nolunye lusondele kakhulu.
Uphawu lwephupha «i-mousetrap» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, iphupha lomgibe wempuku lifuna ngaphezulu Ukungaphumeleli phakathi. Umntu ekubhekiswa kuye kufuneka aqale akhathalele imicimbi ebaluleke kakhulu kwaye angazicingeli kakhulu ngokomoya.